လတ်ြလပ်တရားမ္တွတသည့်ေ႟ြးကောက်ပြဲူဖစ်မည်ဟု အမေရိကန်မယူဆ
ူမန်မိာိုံင်ငံမြာ အရင် အင်အယ်လ်ဒီပၝတီဝင်တခဵြိႚ ဖြဲႚစည်းထားတဲ့ ပၝတီကို စစ်အစိုးရက လက်ခံ ခငြ့်ူပလြိုက်ပေမဲ့ အဲဒီေ႟ြးကောက်ပြဲဟာ လတ်ြလပ်္ဘပီး တရားမ္တွတတဲ့ေ႟ြးကောက်ပြဲူဖစ်လိမ့်မယ်လိုႛ မယူဆိုံင်ဘူးလိုႛ အမေရိကန်ိုိံင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာနေူပာခငြ့်ရြိ ပုဂ္ဂိလြ် Phillip Crowley ကေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။
အမေရိကန်ိုိံင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာနေူပာခငြ့်ရပုဂ္ဂိလြ် Philip J. Crowley သတင်းစာရငြ်းလင်းပြဲူပလြုပ်နေပုံဖစ်ပၝသည်။ (State Dept Image)
အင်အယ်လ်ဒီပၝတီက ခဵမတ်ြခဲ့တဲ့ ဆုံူးဖတ်ခဵက်ကို လေးစားေုကာင်း၊ တဖက်မြာလည်း အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုအနေနဲႛူမန်မာ စစ်အစိုးရနဲႛ တိုက်႟ိုက် ဆြေးြေိံး စကားေူပိာိုံင်အောင် ဆက်လက်္ဘပီး ဋ္ဌကြိးစားဆောင်႟က်ြသြားမြာူဖစ်ေုကာင်း သတင်းစာဆရာတေနြဲႛ တြေႚဆုံရာမြာေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။
ဒၝ့အူပင် Mr. Crowley ကူမန်မိာိုံင်ငံနဲႛ ဆက်ဆံလာခဲ့တဲိံ့စ်ြပေၝင်းမဵားစြာ အတြေႚအုကံအြရ၊ တသီးတူခား အထီးကဵန်ဖယ်ထားတာဟာ ဘာမြ အကဵြိးမူဖစ်ထနြ်းဘူးဆိုတာ တြေႚရေုကာင်း၊ အခုဆိုူမန်မာအစိုးရအရာရြိတေနြဲႛ တိုက်႟ိုက်ေူပာဆိုဆြေးြေိံးမတြေ ရြိခဲ့ေုကာင်း၊ ဆြေးြေိံးမတြေကြ အားရကေဵနပ်စရာမရြိပဲ နောက်တဋ္ဌကိမ် ဘယ်တော့ ထပ်တြေႚူဖစ်မယ်ဆိုတာလည်း အတိအကဵတော့ မေူပိာိုံင်ေုကာင်းေူပာသြားပၝတယ်။
ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် လတြ်ေူမာက်ရေး၊ အရေးပၝတဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတြေ ပၝဝင်လိာိုံင်မဲိုံ့င်ငံရေးလမ်းစဉ် ပေၞထက်ြရေးတိုႛအတကြ် ဋ္ဌကြိးစားသြားမယ်၊ေူမာက်ကိုရီးယားနဲႛူမန်မာ ဆက်သယ်ြပူးပေၝင်းနေုကတာကိုလည်း မူပတ်စောင့်ုကည့် အကဲခတ်နေတယ်လိုႛလည်ိးုိံင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာနေူပာခငြ့်ရြိ ပုဂ္ဂိလြ် Mr. Crowley ကေူပာုကားသြားပၝတယ်။
လောကမှာ လောကပါလ တရားမရှိတော့ဘူးလား? ။ တရားသေသွားပြီဆိုရင်လဲ နိပါတ်တော်ထဲကလို
ဆွမ်းသွတ် အမျှ ဝေရအောင် ။ တရားစောင့် နတ်မင်းတွေ ဘာလုပ်နေကြသလဲ? ။
ဘုန်းကြီးရိုက်သတ်တဲ့ကောင်တွေ ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး
ဒီကောင်တွေ အာဏာဆက်ယူသွားရင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော် ခွင့်မလွှတ်တော့ဘူး ။
Jul 18, 2010 11:24 AM